लघुकथाः काग - bampijhyala.com
Home > कला/ साहित्य > कथा/ कबिता > लघुकथाः काग
३ कार्तिक २०७८, बुधबार २२:२७ bampijhyala
परपर बादल मडारिँदै थियो । रविनको घरतिर भने मन्द घाम लागेको थियो । बिहानको झुल्केघामसँगसँगै दसैंको रहलपहल खानेकुराका पोका बोकेर घरको छतमा गए बा सनत र छोरा रविन ।
बाछोरा दुवैले पन्छीले खाऊन् भनेर खानेकुरा वरिपरि छरे तर पन्छी आएनन् । –खै त बाबा चरासरा केही आको ? रविनले प्रश्न गरे । पख न आउँछन् भनेर आ–आ भन्दै सनतले खानेकुरा पर पर छरे । नभन्दै एउटा काग आएर छेउमा बस्यो । त्यसले का–का–का ग¥यो । एकैछिनमा अरू धेरै कागहरू जम्मा भए ।
कागहरूले खानेकुरा खाने थाले । पहिले आएको काग अझै बोलाउँदै थियोे । कागको यो उदारता देखेर रविनले भने –असल प्राणी भनिने मान्छेले अरूको भाग खोसी खोसी खान्छ, लुटेर, ठगेर, चोरेर के के सक्छ त्यही गर्छ एक्लै खान्छ तर छुचो नराम्रो भनेर हेपिएको कागले त कमजोर साथीहरूलाई बिच बिचको खानेकुरा छोडिदिएर बलियाले पर पर छरिएको बटुल्दै छन्।
फेरि एक्लै नखाएर साथीहरूलाई बोलाई बोलाई मिलेर खाए, खुवाए । यो त पटक्कै स्वार्थ नभएको प्राणी रहेछ हगि बाबा ! अनि नि बाबा ! कागको यो असल गुण मान्छेले पनि सिक्नुपर्ने होइन र ?
एमाले नेतृत्वको बाग्मती प्रदेश सरकार विश्वासको मतबाट भागेर सरकारको आयु लम्ब्याउने खेलमा
२९ पुष २०७८, बिहीबार ०७:५९ bampijhyala 0
-बालकृष्ण ‘पासा’ जब तन यो दोलखामा होलाजब भूमि संस्कृतिमय...
८ पुष २०७८, बिहीबार १३:०८ bampijhyala 0
बिके श्रेष्ठ “पासा”मायाको आधारमा यो संसार अडिएको छ,मायाको साभारमा...
८ पुष २०७८, बिहीबार ०८:५४ bampijhyala 0
जुनु खड्कालगनको उत्तम महिना छानबिन भएपछिम मेरो सक्षमताको प्रमाणपत्र...
माओवादी पदाधिकारीको निर्वाचन माघ २७ मा गदै ३ कार्तिक २०७८, बुधबार २२:२७
दोलखामा थप ४७ जनामा कोरोना पुष्टि ३ कार्तिक २०७८, बुधबार २२:२७
सरकार समयमै तीन वटै तहको निर्वाचन गर्न तयार : सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ३ कार्तिक २०७८, बुधबार २२:२७
प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्री रेणु यादवको जनकपुरमा पुतला दहन ३ कार्तिक २०७८, बुधबार २२:२७
माओवादी केन्द्रले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई माघ महिनाभित्रै पूर्णता दिने ३ कार्तिक २०७८, बुधबार २२:२७